Saddex wareegto, oo lagu qaatay adeegsiga sharciga ee 6 Agoosto 2019 ee ku saabsan isbeddelka adeegga dadweynaha, hagaajinta qorista, isdhexgalka iyo horumarinta xirfadda dadka naafada ah ee adeega bulshada.
Sameynta dhamaadka heshiiska shaqo-barashada
Wareegto lagu daabacay 7-dii Maajo joornaalka rasmiga ah fudud aasaasida dadka naafada ah ee dhammeeyay heshiiska shaqo ee adeegga bulshada. Waxay awood u yeelan doonaan inay ka faa'iideystaan ​​helitaanka tooska ah ee booska habraac habeysan.
Musharrixiinta waa inay u diraan codsigooda joogitaanka ugu yaraan saddex bilood ka hor dhammaadka qandaraas shaqo-barasho ee hay'adda qorista. Tan dambe waxay haysataa hal bil laga bilaabo helitaanka codsiga in la diro soo jeedin ku saabsan joogitaanka iyo sidoo kale hal ama in ka badan oo dalabyo shaqo ah oo u dhiganta shaqooyinkii la qabtay intii lagu jiray tababarka. Haddii aysan lahayn soo jeedin ay sameyso, waxay ku ogeysiineysaa isla waqtiga xaddidan. Musharrixiinta waxay haysan doonaan shan iyo toban maalmood oo ay ku soo diraan codsigooda. Guddi muddo-xileed ayaa baari doona feylasha waxayna ku casuumi doonaan ama aan ku marti-qaadi doonin musharraxiinta wareysiga oo ay tahay
Shaqaalaha naafada ah: qodobbo cusub oo ku saabsan adeegga bulshada July 10th, 2021Tranquillus
horeDhimashada shaqada: maxaa magdhow ah?
socdaCoronavirus: waa joogsi shaqo haddii aad ugu dhowdahay qof nugul